ဗီယက်နမ်လူမျိုး ဇနီးသည်ကို ရိုက်နှက်နှိပ်စက်တာကြောင့် ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတဲ့ ကိုးရီးယားအမျိုးသားတစ်ဦး by popolay.com
Good Morning Myanmar
Idea Can Do
Ta Moe Out
Walk with the Music
Movie Stars - Celebrity
Where Dreams Meet
Myanmar Got Talent
Miss Myanmar World
I Am Scout
Sarp Pra Peng
Sob of Soul
Before Kick Off
ကြွေးမြီပြဿနာကြောင့် ဂရိနိုင်ငံသားအိမ်ထောင်စုတစ်ဝက်နီးပါး ပင်စင်လစာကိုမှီခိုနေရ
ဘိုးအင်း(၇၃၇) လေယာဉ်အသုံးပြုမှုရပ်ဆိုင်းရန် တရုတ်အမိန့်ထုတ်
ရုတ်တရက်နှလုံးရပ်ခြင်းကို ဆရာဝန်များထက် ကွန်ပြူတာ စနစ်ဖြင့်တိကျစွာ ခန့်မှန်းနိုင်
ဆငျပေါကျလေးကို ကယျဖို့ကွိုစားရငျး ဆငျ(၆) ကောငျပွုတျကသြဆေုံး
အသကျ ၁၅ နှဈအောကျ မိနျးကလေးမြား ကလေးမှေးဖှားမှု ၂ နာရီလြှငျ ၁ ယောကျရှိနေ
‘Takata’ အသကျကယျလအေိပျမြား ပေါကျကှဲနိုငျသဖွငျ့ ခကျြခွငျးလဲရနျ သတိပေး
ဟောငျကောငျမှာ မကျြနှာဖုံးစှပျတှကေို ယနညေ့မှာ အငျအားသုံး အရေးယူတော့မညျ
ဒျေါဥမ်မာလှိုငျမှ ဗဈတိုးရီယားရဲ့ရှနေ့နေဲ့ ဖခငျဖွဈသူအပါအဝငျ လူ (၆) ဦးကို ထပျမံတရားစှဲဆို
ကြောငျးကွီးကွပျရေးမှူးဒျေါဥမ်မာလှိုငျမှ အောငျကွီးရဲ့ရှနေ့ဖွေဈသူကို ပုဒျမ (၂) ခုဖွငျ့ တရားစှဲ
ကြိုကျထီးရိုးစတေီတျော ပတျဝနျးကငျြ အမှိုကျမြားလြှော့ခရြနျ စီစဉျနေ
တရားရုံးတှငျ ဗဈတိုးရီးယားမှ ကိုကိုညီညီဓာတျပုံကို ဖနောငျ့နဲ့ပေါကျပွီး လကျနဲ့ထုရိုကျပွခဲ့
မသကေောငျးမပြောကျကောငျး ခွင်ျသရေုံ့ထဲ ဝငျသှားတဲ့အမြိုးသမီး (ရုပျသံ)
အကွငျနာမဲ့စှာ တိရိစ်ဆာနျလေးတှကေို လှောငျအိမျထဲပိတျပွီး ပငျလယျထဲစှနျ့ပဈ
ခဈြသူနဲ့ မိဘတှရေဲ့ ဆန်ဒကို အနဈနာခံပွီး ဖွညျ့ဆညျးပေးလိုကျသူ
ဖုနျးအပူလှနျကဲ ပေါကျကှဲမှုကွောငျ့ ၁၄ နှဈအရှယျ ကြောငျးသူသဆေုံး
ကိုယျဝနျဆောငျမိခငျလောငျးတို့အတှကျ ဘေးအကငျးဆုံး အိပျစကျနညျးမြား
လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျစရာမလိုပဲ ၁၅ မိနဈအတှငျး ခါးနာပြောကျနညျး
The Best Seafood In Yangon
သင်ျကွနျတှငျးမှာ မုနျ့လုံးရပေျေါ လုပျစားရအောငျ..
ဆားနဲ့ အလှအပ ကျန်းမာရေး
အိမ်မှာရှိတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို အလွယ်တကူ သိမ်းမယ်ပြင်မယ်
ကိုယျနဲ့ပွတျပွီး မကွာခငျ နောကျတဈယောကျကို ဘာကွောငျ့ လကျထပျသှားတာလဲ..?
မိဘတွေ ကိုယ့်ကလေး ပျက်ဆီးနေပြီလားဆိုတာ သိနိုင်တဲ့ အချက်(၁၀)ချက်
အောင်မြင်ဖို့အတွက် အချက် (၅) ချက်
နှင်းဆီပန်း အရောင်နှင့် သူတို့ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်များ
Walk with music
Walk with Music (Episode 264)
Where dream meets
နီနီခင်ဇော်နှင့် ပြိုင်ပွဲဝင်များ အတူမျှော်လင့်ချက်တစ်စုံတစ်ရာသီချင်းသီဆို
ပွဲအပြီးသီဆိုဖျော်ဖြေခဲ့ တဲ့ လူးလူ ရဲ့ ပို၍လှသောမနက်ဖန်
အိပ်မက်ဆုံရာ - ရာသက်ပန် Season3winner ကြေညာခြင်း
Eain Mat Sone Yar Season3Final မှ လဖိုင်နန်ရော် ရဲ့ သီဆိုယှဉ်ပြိုင်မှု
Stars & Celebrity
အဆိုတျော ဖွိုးပွညျ့စုံ မူးယဈဆေးဝါးမှုနဲ့ အဖမျးခံရ
ဂူဟဲဆောငျးနျရဲ့လုပျရပျတှကေ ခငျပှနျးသညျ အနျဂယျြဟှနျး ထိခိုကျနဈနာစဖေို့လား?
လူမြိုးရေးဝါဒ ကွီးစိုးတဲ့ ဆျောဒီအာရဗေမြှာ ဖြျောဖွရေေးပှဲ သှားရောကျကငျြးပမယျ့ BTS
ခုခြိနျထိ ရညျးစားမရနိုငျသေးတဲ့အကွောငျးအရငျးကိုပွောပွလာတဲ့ Yoo Seung Ho
"ရှဖေူးစာဆုံရာမွေ" ရုပျသံဇာတျလမျးတှဲကို 25 ရကျနေ့ MRTV-4 ရုပျသံလိုငျးမှ 7:00 နာရီတှငျစတငျထုတျလှငျ့ပွသသှားမညျဖွဈပါသညျ။
နှဈပေါငျး ၅၀ အတှငျး ပထမဦးဆုံး ရုပျရှငျထူးခြှနျဆုကွညောခံရသညျ့ အာရှမငျးသမီး
Halloween ညနဲ့ လိုကျဖကျတဲ့ ဇာတျကားမြား
မိုရီဆာကီဝငျး (အဝငျး) ပါဝငျသညျ့ Ready Player One မကွာမီရုံတငျမညျ
ရုံမတင်ခင်ထဲက လက်မှတ်ဈေးနှုန်း ဒေါ်လာ ၁ သောင်းထိဖြစ်သွားတဲ့ Avengers:ENDGAME
အံ့သြစရာကောင်းလွန်းတဲ့ လူသားကဏန်းပေါင်းစက် (ရုပ်သံ)
စန္ဒယားအဟောင်းတစ်လုံးထဲ တူရိယာအမျိုး ၂၀ ထည့်ထားတဲ့ သံစုံတီးဝိုင်းအသေးစား (ရုပ်သံ)
Level အသစ်တွေထပ်တိုးလာတဲ့ The Voice Myanmar Season 2
ပရီးမီးယားလိဂျခနျြပီယံဆု ဘယျအသငျးရမယျဆိုတာကို ခနျ့မှနျးပေးခဲ့တဲ့ ဝိနျးရှနျးနီ
ဂိုးသမားဒီဂီယာ လကျစှမျးပွပွီး အယျခမာအသငျးထံမှ သရတေဈမှတျခှဲယူခဲ့တဲ့ မနျယူ
ဘာစီလိုနာနဲ့ ကစားမယျ့ပှဲတှငျ အငျတာမီလနျ တိုကျစဈမှူး လူကာကူလှဲခြျောမယျ
“ မွောကျလနျဒနျက အနီရောငျ ” လို့ စပါးအသငျးကို လှောငျပွောငျခဲ့တဲ့ နာဘရီ
ဘရနျဒနျ ဗီရာကို ငါးခြီအတှငျးအလဲထိုးသှားမယျ့ အောငျလအနျဆနျ
ရုရှားဖိုကျတာ ခါဘဈကို မကပြှေဲပွနျလညျ ထိုးသတျဖို့ စိနျချေါခဲ့တဲ့ မကျဂရီကျော
အနောကျနိုငျငံတှကေပါ သတိထားမိဖို့ ဗီရာကိုအနိုငျထိုးသတျပွမယျ့ အောငျလအနျဆနျ­
ဘရနျဒနျ ဗီရာနဲ့ အောငျလအနျဆနျတို့ ထိုးသတျမညျ့ပှဲ လကျမှတျပေါကျစြေး(၁)သိနျးမှ သိနျး(၂၀)အထိရှိနေ
အိန်ဒိယကွကျတောငျမယျ ဂူမာဒီကို ၂ ပှဲပွတျဖွငျ့ ရှုံးကွှေး ပွနျဆပျနိုငျခဲ့တဲ့ သကျထားသူဇာ
အိန်ဒိယကွကျတောငျမယျ ဂူမာဒီကို ရှုံးကွှေးပွနျဆပျခှငျ့ရတော့မယျ့ သကျထားသူဇာ
မျောလျဒိုကျ ကွကျတောငျပွိုငျပှဲတှငျ ဒုတိယဆုနဲသာ ကနြေပျခဲ့ရတဲ့ သကျထားသူဇာ
E- Sports ပွိုငျပှဲတှငျ ထိုငျးဘုနျးကွီးအသငျး ပထမဆု ဆှတျခူးရရှိ
လူစွမ်းကောင်းလေးများနဲ့ Myanmar’s Got Talent 2019 Grand Final ည
မြန်မာဆိုတာ ကမ္ဘာကသိအောင် စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ “ဘုန်းမြတ်မင်း” MGT09 (ရုပ်သံ)
“ဇော်ဝင်းထွဋ်”ထက် နှာတစ်ဖျားသာပြလိုက်တဲ့ “ဝင်းဆန်းအောင်”
Myanmar’s Got Talent ရဲ့ အကောင်းတကာ့ အကောင်းဆုံး ဆီမီးဖိုင်နယ်လ်ည
ရုက္ခစိုးမကယ်နိုင်ပေါင် ဟာသပြဇာတ် (Joker Variety)
ဂျက်အရိုး ဟာသပြဇာတ် (Joker Variety)
Miss Myanmar World 2017 အလှမယ်လေးတွေရဲ့ Activity များ
ပြိုင်ပွဲဝင်အလှမယ် အယောက် (၄၀)ထဲမှ ဆန်ကာတင် အယောက်(၂၀) ရွေးချယ်ခြင်း
Miss Myanmar World 2017 သရဖူ
အသက်သုံးနှစ်သာ ရှိသေးပေမယ့် ဘာသာစကားလေးမျိုးပြောနိုင်သော ကလေးလေး
အကာအကွယ်မဲ့စွာ မြွေဟောက်တွေကို ဖမ်းပြနေသူ
အသံစုံဖြင့် ဒိုင်တွေကို မျက်လုံးဗြူးပါးစပ်ဟောင်းလောင်းကြီး ဖြစ်စေခဲ့သူ
Family & Kidsမိသားစုနှငျ့ကလေး
English is Fun (Episode 185)
English is Fun (Episode 177)
English is Fun (Episode 178)
English is Fun (Episode 180)
Sumo Family vs. X Family
Sumo Family vs. Win Together
Lone Lone vs. Star
Toke Toke vs. Lone Lone
ဗီယက်နမ်လူမျိုး ဇနီးသည်ကို ရိုက်နှက်နှိပ်စက်တာကြောင့် ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတဲ့ ကိုးရီးယားအမျိုးသားတစ်ဦး
08 Jul 2019 56,903 Views
တောင်ကိုးရီးယားနိုင်ငံရှိ အသက် ၃၆ နှစ်အရွယ် အမျိုးသားတစ်ဦးဟာ ဗီယက်နမ်လူမျိုး ဇနီးသည်ကို ရိုက်နှက်မှုနဲ့ ရဲစခန်းမှာ ဖမ်းချုပ်ထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရပါတယ်။ ရိုက်နှက်ခံအမျိုးသမီးဟာ ဗီယက်နမ်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ကိုးရီးယားလူမျိုးနဲ့ အကြောင်းပါတာကြောင့် တောင်ကိုးရီးယားမှာရောက်ရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ ဇနီးမောင်နှံမှာ လမ်းလျှောက်တတ်ခါစအရွယ် သားလေးတစ်ယောက်ရှိပြီး မိခင်အရိုက်ခံရတဲ့အခါ ကလေးငယ်ဟာ ရှိုက်ကြီးတစ်ငင် ငိုကြွေးနေခဲ့ပါတယ်။ ကိုးရီးယားလူမျိုး ဗီယက်နမ်ဇနီးသည်ကို ရိုက်နှက်နေခဲ့တာကို ရဲအနေနဲ့ ဘယ်လို သိရှိပြီး ဖမ်းဆီးရမိတယ်ဆိုတာ သိရှိဖို့ ဆက်လက်ဖတ်ရှုလိုက်ကြရအောင်။
>>ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန် Read More ကိုနှိပ်ပါ။<<
ပြီးခဲ့တဲ့ ကြာသပတေးနေ့ ည (၉) နာရီအချိန်အခါမှာ အမျိုးသား တစ်ဦးက ဗီယက်နမ်မှာရွေ့ပြောင်းနေထိုင်တဲ့ ဇနီးသည်ကို ပြင်းထန်စွာရိုက်နှက်နေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Yeongam ရဲစခန်းအနေနဲ့ ဒီကိစ္စကို တိုင်ကြားခံရပြီးနောက် ရိုက်နှက်သူ အမျိုးသားကိုဖမ်းဆီး ထိန်းချုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီအဖြစ်အပျက်မျိုးဟာ အခုမှ ဖြစ်လာတာမဟုတ်ပဲ တောင်ကိုးရီးယားနိုင်ငံသားနဲ့ လက်ထပ်ထားတဲ့ နိုင်ငံခြား အမျိုးသမီးတွေဟာ ဒီလိုအဖြစ်အပျက်မျိုးတွေ အနည်းနဲ့အများကြုံတွေ့နေရကြောင်း ပြည်သူများမှ ရင်ဖွင့်ပြောဆိုလာကြပါတယ်။
အဆိုပါ အမျိုးသားအား Yeongam ရဲစခန်းမှ ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ပြီးနောက် လူမှုကွန်ယက်မှာ ဗွီဒီယိုတစ်ခုတက်လာပါတယ်။ တောင်ကိုးရီးယားအမျိုးသားတစ်ဦးက ဗီယက်နမ်ဇနီးသည်ကို မညာမတာ ရိုက်နှက်ပြီး ညှင်းပန်းနှိပ်စက်နေတဲ့ ဗွီဒီယိုဖိုင်ပါ။ အဆိုပါ ဗွီဒီယိုကို တင်ပေးရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ဒီလို အိမ်တွင်း ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေ ရှိလာရင် ငြိမ်ခံမနေပဲ သက်ဆိုင်ရာကို အကြောင်းကြားတတ်ဖို့ ၊ မိန်းကလေးများ အိမ်ထောင်မပြုခင် အသေအချာ လေ့လာစုံစမ်းသင့်ကြောင်း ဖော်ပြလိုတဲ့အနေနဲ့ တင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
တောင်ကိုးရီးယားအမျိုးသားဟာ သူ့ဇနီးသည် ဗီယက်နမ်အမျိုးသမီးကို ဘယ်လို ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ထားတယ်ဆိုတာ သိရှိဖို့ ဗွီဒီယိုမှာ ဆက်လက်ကြည့်ရှုလိုက်ရအောင်>>
Most Popular of International News
၁၀ နှဈသမီးလေးရဲ့ မင်ျဂလာဆောငျရုပျသံက တဈကမ်ဘာလုံးကိုရိုကျခတျ
နန္ဒနဲ့အထင်လွဲပြီး ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဇနီးအား ယောက်ျားဖြစ်သူ ဓားနဲ့ထိုး
ပိရမစ်ပေါ်တက်ပြီး မဖွယ်မရာလုပ်တဲ့ စုံတွဲ အီဂျစ်အာဏာပိုင်များ အရေးယူရန်ပြင်ဆင်
Most Popular of NEWS
Myanmar’s Got Talent
Special or Others
လူအများလေးစားခြင်းခံထားရသည့် ဘုန်းကြီး လိင်တူဆက်ဆံ ရုပ်သံကြောင့် ဖမ်းဆီးခံရ
မိုးတွင်းမှာ ချောင်းကိုဖြတ်ပြီး ကလေးတွေကို ခက်ခက်ခဲခဲ ကျောင်းပို့ပေးတဲ့ မိဘ(ရုပ်သံ)
တတိယမွောကျဆုံမှတျ | အပိုငျး-၂၉ (၄/၄)
တတိယမွောကျဆုံမှတျ | အပိုငျး-၂၈ (၁/၄)
တတိယမွောကျဆုံမှတျ | အပိုငျး-၂၉ (၃/၄)
©2015 WWW.POPOLAY.COM All rights reserved.
Produced by POPOLAY.COM.
Music & Celebrity
Sarp Pra Pen